အတော်လေးကို အရှက်နည်းတဲ့ ပါးစပ်ပေါက်က ” မြန်မာနိုင်ငံသား တိုင်းရင်းသား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ အပါအဝင် လူမျိုးပေါင်းစုံ၊ ဘာသာဝင်ပေါင်းစုံက ရရာလက်နက်နဲ့ အမိမြေကို ကာကွယ်ဖုိ့ အချိန်ကျရောက်လာပြီ …. ” လုိ့မိန့်ခြွေလာ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« သွေးနဲ့မော်ကွန်းထိုးတဲ့ ရိုဟင်ဂျာသမိုင်း
ဖုန်ကြားရှင်မှ တစ်ကမ္ဘာလုံးက တရုတ်တွေကို လိပ်မူရေးသားထားတဲ့ စာထဲမှာ ငိုပွဲချထားပါတယ် »
အတော်လေးကို အရှက်နည်းတဲ့ ပါးစပ်ပေါက်က ” မြန်မာနိုင်ငံသား တိုင်းရင်းသား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ အပါအဝင် လူမျိုးပေါင်းစုံ၊ ဘာသာဝင်ပေါင်းစုံက ရရာလက်နက်နဲ့ အမိမြေကို ကာကွယ်ဖုိ့ အချိန်ကျရောက်လာပြီ …. ” လုိ့မိန့်ခြွေလာ
“အတော်လေးကို အရှက်နည်းတဲ့ ပါးစပ်ပေါက်တွေ”
Kyaw Win with Zaw Min Oo and 10 others
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က လောက်ကိုင်ဒေသ တိုက်ပွဲများဟာ သာမန်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်မဟုတ်ဘဲ အချုပ်အခြာအာဏာထိပါးခြင်း၊ ကျူးကျော်ခံရခြင်း တနည်းအားဖြင့် ပြည်ပနိုင်ငံတစ်ခု(တရုတ်လုိ့မပြော)က မြန်မာနိုင်ငံကို ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်…. လုိ့ တရားဝင်ပြောကြားလာတဲ့ အပေါ်မှာ Facebook စစ်မြေပြင်ရဲ့ တပ်မှူးနှင့်တကွ အရာရှိအရာခံ၊ အကြပ်တပ်သားတွေလည်း မျက်ကလဲ ဆန်ပြာဖြစ်ကုန်ကြတယ်။ လေသံတွေလည်း ချက်ချင်းပြောင်းသွားတယ်။ Facebook ပေါ်မှာ လေနဲ့ အသတ်ခံလိုက်ရတဲ့ ပြည်တွင်းနေတရုတ်တွေလည်း အတော်အထိနာသွားကြတယ်။
” မြန်မာနိုင်ငံသား တိုင်းရင်းသား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ အပါအဝင် လူမျိုးပေါင်းစုံ၊ ဘာသာဝင်ပေါင်းစုံက ရရာလက်နက်နဲ့ အမိမြေကို ကာကွယ်ဖုိ့ အချိန်ကျရောက်လာပြီ …. ” လုိ့ မိန့်ခြွေလာတာကို သေချာအောင်လုိ့ နှစ်ခေါက်လောက် ပြန်ဖတ်ယူရတယ်။
အော် ….. အတော်လေးကို အရှက်နည်းတဲ့ ပါးစပ်ပေါက်တွေပါလား။ မင်းတုိ့ကိုယ်တိုင် ငါတုိ့ကို ပြောခဲ့တဲ့
ဧည့်သည်က ဧည့်သည်လိုနေ ….. ကောင်းကောင်းမနေချင်ရင် ထွက်သွား …. နောက်ဖေးပေါက်က ဝင်လာတဲ့ မွတ်ကုလား …. မြန်မာနိုင်ငံရေးက မွတ်ကုလားတွေနဲ့ ဘာမှမဆိုင် …………………………………………………………………………………………………………….. စတဲ့ အပမနာ စကားတွေကို မေ့သွားပြီလား။ သာစရာရှိတော့ ဧည့်သည် မွတ်ကုလားတွေ၊ နာစရာရှိတော့ တိုင်ရင်းသား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ …. တဲ့လား။
အေး ….. ငါတုိ့ကလည်း ပြန်ပြောလိုက်မယ်။ ငါတုိ့ဟာ ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် ကိုယ်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် သစ္စာရှိခဲ့တာ သမိုင်းအစွန်းအထင်းမရှိခဲ့တာ မင်းတုိ့လည်းသိတယ်၊ မင်းတုိ့အဘတွေလည်းသိတယ်၊ ကုန်ကုန်ပြောမယ်…. မွတ်စ်လင်မ်တွေကို ဒုက္ခပေးနေတဲ့ ဟို ဖျာသည်မခေါင်းဆောင်တဲ့ အဖွဲ့လည်းသိတယ်။
အခုလည်း လိုအပ်လာရင် မင်းတုိ့ပြောပြောနေတဲ့ နွားသတ်တဲ့ မွတ်ကုလားတွေက နွားသတ်တဲ့ ဓါးကိုင်ပြီး ကိုယ့်စားရိတ် ကိုယ်စားပြီး နိုင်ငံကို ကာကွယ်ဖုိ့ အဆင်သင့်ပဲ။ ဒါပေမဲ့ လောလောဆယ်ဆယ်တော့ မင်းတုိ့လက်နဲ့ပေးထာတဲ့ ငါ့တုိ့ကိုယ်ပေါ်က ရခိုင်၊ မိတ္ထီလာ၊ လားရှိုး၊ ဥက္ကံ၊ ထန်းကုန်း၊ မန္တလေး…. စတဲ့ ဒဏ်ရာတွေက အကင်းမသေသေး၊ မပျောက်သေးလုိ့ မင်းတုိ့အရင်ထွက်တိုက်နှင့်ဦး။ မကြာခင် ငါတုိ့ ထွက်တိုက်ပေးမယ်။
အော်…. ဒါနဲ့ …. စကားမစပ်…. မင်းတုိ့ ပြောတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေထဲမှာ ရခိုင်တွေကိုရော ဝင်တိုက်ပေးဖုိ့ ဖိတ်ခေါ်ထားသေးလား ? ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး ….. ကျူးကျော်လာသူတွေဘက်က ရက္ခိုင်တပ်မတော်(AA) ဆိုတာကို တွေ့မိလုိ့ပါ။ ကို ဝါဇီ လှမြင့် ဝါဇီ လှမြင့် စကား ခဏငှါးသုံးရရင်….. စ သာပါ။ စ သာပါ။
Ref : The Voice Daily ( February 15 )
This entry was posted on February 15, 2015 at 9:14 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.